Igbe mbadamba ihe eji emepụta ihe na -ebilite na China wepu ụlọ nrụpụta igbe na ndị na -ebubata ya Akwụkwọ doro anya
ntekwasa ịkpakọba igbe osisi
ọkwa nri FBB.SBS
Ọnụahịa kasị elu nke GC1. GC2
NINGBO FOLD C1S Ogwe osisi Ivory
ntekwasa art akwụkwọ/osisi
C1S akwụkwọ nka / bọọdụ
Akwụkwọ nkà / bọọdụ nka C2S
nnukwu nka nka
dechapụ / detuo akwụkwọ
i copyomi akwụkwọ
Akwụkwọ nwere ike imebi bio
Mpempe akwụkwọ mpịakọta EPP
PE ntekwasa cup akwụkwọ
kraft akwụkwọ/PE ntekwasa
Emechara akwụkwọ ngwaahịa
Njem ụlọ ọrụ
ntekwasa art akwụkwọ
Ihe na -emebi emebi tableware bagasse pulp food container ...
elu mma china N'ogbe recycled ahaziri logo ...
akwụkwọ ahaziri ngwa ngwa nri ngwa ngwa nri mmanụ
Factory N'ogbe nri ọkwa Foil Akwụkwọ ahaziri s ...
PLA kpuchie akwụkwọ biodegradable na 100% Bio ...
Ọpụrụiche Akwụkwọ dechapụ Printing ntekwasa Agba maka cus ...
Recycled testliner osisi akwụkwọ na aja aja azụ manuf ...
Super C1S Nkpakọba Box Board/ GC1 ọdụ ọdụ/ High B ...
OEM elu mma nri ọkwa ọdụ ọdụ/FBB/SBS Board ...
Ezi aha onye ọrụ maka C1s Ivory Board - arụgharịrị ...
Akwụkwọ Mwepụ Ezi afọ 8 Maka Akwụkwọ ndetu - Top Qua ...
Igbe ihe na -emebi emebi akpa akpa pulp akpa nri na -ewepụ igbe
Nkowa dị mkpirikpi:
Enyi na gburugburu ebe obibi, compostable (ụbọchị 90)
Nchekwa ngwa nju oyi, oven na ngwa ndakwa nri
Nguzogide mmiri, nkwụsị mmanụ. mgbochi mgbochi
Tinye aka na ndụ ndụ ndụ, yana ngwaahịa dị elu
Isi ihe ọmụma: Gịnị bụ compostable?
Dabere na ọkọlọtọ ASTM (American Society for Testing and Materials). ngwaahịa compostable ga -enwerịrị ike gbarie na carbon dioxide, mmiri na biomass. Ha ekwesighi iwepụta ihe ọ bụla na -egbu egbu n'oge a na -eme ya ka ha wee nwee ike kwado ndụ osisi. Ọ na -acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ site na mmalite ruo n'isi.
Ngwa ahịa pulp anyị kpụrụ akpụ bụ ma ụlọ ma ụlọ mmepụta ihe nke BPI (US), TUV Austria (EU) na ABA (Australia/New Zealand) gosipụtara. Omume carbon dị ala nke nkwakọ ngwaahịa pulp bụ ihe omume gburugburu ebe obibi.
Ngwọta ụlọ ọrụ
Gbado anya na ngwungwu enyi na gburugburu ebe obibi
HOTEL na nri abalị
BAKERY & CHAIM CHAIM
Wepụ & WERE
Nguzogide elu na obere ala
Mmiri na -eguzogide, nkwụsị mmanụ. mgbochi mgbochi
Ngwaahịa zuru oke
Enyi na gburugburu ebe obibi, na -emebi emebi n'ime ụbọchị 90
SURE PAPER na-enye ọtụtụ ngwungwu ngwugwu na-adịghị mma na gburugburu ebe obibi na ọrụ kacha mma yana ngwaahịa dị elu
Were- wepụrụ usoro usoro
Ọhụrụ ngwaahịa-pulp wonton containers
Enwere ike iji arịa abụọ nke wonton jide ụdị dị iche iche nke wonton na dumplings. Nhazi nke ihe okike dabara adaba maka ụdị wonton dị iche iche. Mkpuchi concave nwere ike fx nri n'ime akpa ma gbochie ya ịgagharị ka ọ nwee ike idobe ngosi nri zuru oke.
Ngwaahịa na -ere ọkụ
Oghere akpa akpa- A na-enye nhọrọ nhọrọ ịwepu ihe nwere nha isii. Ọmarịcha imewe “mkpọchi mkpọchi” dị mfe ijide & gaa, a na -echekwa arụmọrụ ya maka njem dị nchebe, nke ga -egbo mkpa nri iji gaa na ahịa nri e nyere.
BERE- WERE ỤLỌ AGBỤ AKA
ỌHỌ ỌHỤRỤ -ọkwá ndị oval: dị mma maka iwepụ ya
Mpempe akwụkwọ oval a dị mma maka ndị na-ere nri na ndị na-eri nri na-enye nhọrọ nri dị ka noodles, pasta, curries, burritos, salads. Nha abụọ (620ml & 770ml) dị maka mkpa gị. Ọ fts zuru oke n'ime akpa akwụkwọ mkpofu. Nhazi ngwaahịa ọhụrụ a na-enye ụwa abụọ kacha mma: kacha mma na nkwado maka iri nri na-aga.
IN-HOME & RETTAURANT PLET SERIES
ỌZỌ mmepụta usoro
Friza na ngwugwu Pulp Pulp (FHHP) dabara adaba maka itinye ya n'ọrụ ngwa ngwa. Ọ bụ site na fomula ọhụrụ anyị ka anyị ga -amata dị ka “Otu ngwugwu” nke eriri nri. Ọzọkwa, ọ na -enyere aka belata ọnụ nkwakọ ngwaahịa, iji kpochapụ ihe eji eme ihe, iji nweta arụmọrụ dị elu na ọnụ ala.
Ọ bụ ezie na enweelarị narị narị ụdị na ụlọ ọrụ anyị, anyị ka na -anabatakwa ịmepụta ngwa ahịa mkpụrụ osisi pulp dị ka nha gị na akara gị.
Ka anyị gbaa mbọ mee ka ala nna anyị na -acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ka mma.
Ụlọ nkwakọba ihe
Nke gara aga: N'ogbe ndị na -ere ahịa nke China OEM Custom Disposable Logo E Bipụtara Otu Oghere Akwụkwọ Iko Coffee 8 Oz
Osote: 100% Original Factory China nnukwu akwụkwọ Ningbo n'ogige atụrụ Fbb C1s Ivory Board
nnukwu efere efere bagasse
akpa nri bagasse
akpa akpa akpa
nnukwu efere nnukwu akpa bagasse
nnukwu efere salad
nnukwu efere slopes
akpa nri mmiri bagasse
akpa akpa akpa akpa
efere efere okpete bagasse efere
IOS Certificate China omenala Logo Food mezuwo Bu ...
2019 China New Design China C1s ntekwasa Ivory Bo ...
High Quality maka China Single Wall Disposable P ...
Ezi uche price China 210GSM 230GSM 250GSM 270 ...
Factory Cheap Hot China Ningbo APP n'ogige atụrụ Board/m ...
Factory ngwaahia China Nevia Brand Ugboro abụọ Sid ...
Adress: ụlọ 1303-2, NO.158 TAIAN n'etiti okporo ụzọ, SHOUNAN STREET, YINZHOU, NINGBO
Were gị mara “ngagharị iwe akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ...
Ịzụ ahịa n'ịntanetị na n'ịntanetị ga -enwe nnukwu nkwakọ ngwaahịa. Agbanyeghị, ihe ndị na-abụghị gburugburu ebe obibi na nkwakọ ngwaahịa na-abụghị ọkọlọtọ ga-ebute mmetọ gburugburu ebe obibi n'ụwa. Taa, ụlọ ọrụ nkwakọ ngwaahịa na -aga '' mgbanwe ọchịchịrị '', na -anọchi m ...
Ka anyị jide egwuregwu mkparị ahịhịa
Edepụtara plastik dịka otu n'ime ihe ndị kacha emepụta na narị afọ nke 20. Plastic dị ka mma agha ihu abụọ. Ọ bụ ezie na ọ na -ewetara anyị ntụsara ahụ, ọ na -ewetara gburugburu ebe obibi nnukwu ibu. Iji gbochie mmetọ ọcha, mba dị iche iche na -enwe iss na -aga n'ihu ...
Mgbe ị gụchara nke a, ị na -amaja ị drinkụ ...
Nye ọtụtụ ndị mmadụ, ezigbo mmalite bụ ọkara ọgụ. Ọrụ ụtụtụ na -amalite mgbe iko kọfị na -ekpo ọkụ ... N'oge a, caffeine na -ejikọ otu ihe nnabata n'ụbụrụ, na -eme ka ụbụrụ ghara ịnata akara "ike ọgwụgwụ", yabụ na ọ na -enye ndị mmadụ nkwalite ike. Hwee ...
Banye na igwe ihe ọkụkụ APP wee hụ ka t ...
Site na mgbanwe anwansi site na osisi gaa n'akwụkwọ, usoro dị a didaa ka ọ gafere na ụdị akụkọ ọ nwere? Nke a abụghị ọrụ dị mfe. Ọ bụghị naanị usoro nke usoro, kamakwa ụkpụrụ dị elu yana ihe siri ike chọrọ. Oge a, ka anyị banye n'ime igwe ihe ọkụkụ APP ka inyocha t ...
Zero Plastic akwụkwọ cup akwụkwọ nwetara TÜV ...
Na Mee 25th, onye isi osote onye isi oche nke TÜV Rheinland Greater China nyere DIN CERTCO na European Bioplastics Association asambodo asambodo ụlọ ọrụ mmepụta ihe na APP Sinar Mas Group Industrial Paper. Ngwa a gbaara ezi ama bụ akwụkwọ iko Zero Plastic® ọhụrụ nke APP Si ...
Jikọọ n'akwụkwọ akụkọ anyị
N'ihi na jụrụ ase banyere anyị na ngwaahịa ma ọ bụ pricelist, biko hapụ gị email ka anyị na anyị ga -enwe na aka n'ime 24 awa.